Inicio/Ciencia/Sigaar cabiddu waxay horseedi kartaa cudurka macaanka uurka
0 2.693 1 daqiiqo akhri
Sigaar cabista xilliga uurka waa halista ugu weyn ee soo food saarta hooyada iyo uurjiifka.
Koox saynisyahano iyo dhakhaatiir caalami ah oo caan ah ayaa ogaaday taas sigaar cabista xilliga uurka kaliya maahan waxyeello uurjiifka, laakiin sidoo kale waxay kordhin kartaa halista in haweeney ay ku dhacdo kaadi macaanka uurka.
Horumarka sonkorowga uurka Waxay keeni kartaa dhibaatooyin inta lagu jiro habka uurka, tusaale ahaan; dhalmada qalliinka ama macrosomia, oo ka weyn carruurta caadiga ah.
Madaxa kooxda cilmi-baarista, Dr. Yael Bar-Zeev oo ka tirsan Jaamacadda Cibraaniga ee Jerusalem; Iyadoo ay weheliyaan iskaashiga Dr. Haile Zelalem iyo Iliana Chertok oo ka tirsan Jaamacadda Ohio, waxay ahaayeen qorayaasha ugu muhiimsan ee baaritaanka daahfurka.
Sigaar cabista inta lagu jiro uurka, khatar weyn ayey u tahay hooyada iyo uurjiifka labadaba.
Dr. Bar-Zeev iyo kooxdiisu waxay sameeyeen falanqeyn cilmiyaysan oo ku saabsan xogta laga helay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ee Mareykanka. Si loo fuliyo daraasaddan; tijaabiyey ilaa 222.408 haween ah oo umushay intii u dhaxeysay 2009 iyo 2015, kuwaas oo ku saabsan 5,3% ka mid ah laga helay sonkorowga uurka.
Baarayaasha ayaa awooday in ay ogaadaan in haweenka uurka leh ee cabba isla tirada sigaarka maalintii waxyar uun kahor howsha uurka ay ku dhowdahay 50% halista ugu badan ee cudurka sonkorowga uurka iyo dumarka yareeya tirada sigaarka weli waxay leeyihiin khatar 22% ah marka loo eego dumarka aan sigaarka cabi karin ama xitaa joojiya qiyaastii laba sano ka hor.
Caadaysiga sigaar cabista xilliga uurka waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah sababaha ugu halista badan marka la eego horumarka embriyaha gudaha caloosha haweeneyda. Waddanka Maraykanka, 10.7% haweenku waxay sigaar cabaan inta ay uurka leeyihiin ama waxaa laga yaabaa inay ku dhacaan qiiqa sigaarka.
Diabetes Sonkorowga uurka Sonkorowga Uurka Mellitus Mareykanka sigaar cabista xilliga uurka Haile zelalem Iliana Chertok Jaamacadda Ohio
Xbox Series X, Console cusub ee Microsoft